Vaovao - Foton dia nandefa bus fitaterana angovo vaovao miisa 2.790 ho any Beijing
FOMBA FOMBA FOTON
Foton dia nandefa bus fitaterana angovo vaovao miisa 2.790 ho any Beijing
Ny 25 martsa lasa teo dia nisy lanonana lehibe natao tao amin'ny foiben-toeran'ny Foton any Beijing hanamarihana ny fandefasana bus fitaterana angovo vaovao miisa 2.790 ho an'ny mpanjifany, Group Public Transport Group an'ny Beijing. Miaraka amin'ny fiatobiana aotobisy vaovao vaovao Foton, dia manakaiky ny 10.000 ny isan'ireo fiara fitateram-bahoaka vaovao Foton miasa any Beijing.
Nandritra ny lanonam-panaterana, Kong Lei, Tale lefitry ny Birao Fampahalalam-baovao sy toekarena ao Beijing, dia nanipika fa be dia be ny fiara fitateram-bahoaka vaovao any Foton izay hampiditra ny dinamika vaovao amin'ny fanavaozana sy fanovana ny rafitry ny fitateram-bahoaka any Beijing.
Zhu Kai, Tale Jeneralin'ny vondrona fitateram-bahoaka ao Beijing, dia miresaka betsaka ny amin'ny fiaraha-miasan'ny orinasany miaraka amin'i Foton, ary nilaza fa hanohy ny fiaraha-miasa ataon'izy roa tonta hanapahana ny famoahana gazy any an-drenivohitra. Araka ny voalazan'i Zhu, ny vondrona fitateram-bahoaka any Beijing dia nividy fiara fitateram-bahoaka 6,466 Foton AUV tamin'ny taona 2016 ka hatramin'ny 2018 izay nitentina 10,1 miliara RMB.
Amin'ny maha-mpilalao an-tsehatra amin'ny indostrian'ny bus fitaterana angovo vaovao any Shina, nahavita zava-bita mahavariana i Foton raha ny fanavaozana ny teknolojia sy ny fanaovana varotra fiara mpitondra angovo vaovao tato anatin'ny folo taona lasa.
Noho ny asa mafy nataony, dia nivarotra fiara 83177 i Foton ary namidy fiara 67172 tamina roa volana voalohany tamin'ity taona ity, 17,02% ary 17,5% kosa.